Otu nchịkọta Semalt nwere ike isi bulie ogo gị SEO
Ọ bụrụ n’inwe azụmahịa na ntanetị, ị ga-amarịrị maka njikarịcha nchọta, SEO. Ọ bụ ngwakọta nke teknụzụ nka na nka na nka na ụzụ nke enwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ nọrọ n'ọnọdụ dị elu na nsonaazụ ọchụchọ. Ebe nrụọrụ weebụ ahaziri maka SEO na-enwetakwu ndị ọbịa ma na-esitekwu traction. Google na Bing bụ igwe ọchụchọ kachasị ewu ewu na ebe a. Ọ bụrụ na ijila otu, ị ga-amata na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị elele ibe nke abụọ ịchọ ihe ha na-achọ. Yabụ, asọmpi maka ibe mbụ megide ụfọdụ isiokwu ọchụchọ dị njọ, ikwu ntakịrị.
Kemgbe Web 2.0, ụwa nke teknụzụ ahụla nnukwu mgbanwe. Ọbụghị naanị ka ọha mmadụ gbanwere ọgbara ọhụrụ, o nyekwara ụlọ ọrụ aka na ụlọ ọrụ aka ime mkpebi ndị amachara ma -abatakwa mgbe ị na - achọ mkpebi. Ntughari bu ihe mere eji enyere ha aka ime ya. Sọftụ nyocha ejirila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ubi na ahịa ọ bụla, ma ọ bụ dijitalụ ma ọ bụ otu aka, emeela ka ọ baa uru na ya.
Nchịkọta Semalt bụ ngwanrọ nyocha nyocha nke na-enye ndị nwe ụlọ ọrụ ntanetị aka ịkpa oke nke ọma na ọnọdụ nke onye asọmpi ha banyere SEO na arụmọrụ ahịa n'ozuzu ya. Ihe omuma ya zuru oke na nke nhazi nke oma gha enyere ndi oru aka na ndi nwe ulo aka ịghọta nke oma: ogugu nke ulo oru ha, na enyere ha aka ime mkpebi ndi di nma ma buru n’iru egwuregwu ha.
Ọ bụrụ na ị na-elele ezigbo ngwanrọ nyocha iji nyere aka bulie ogo SEO nke weebụsaịtị gị, mgbe ahụ Semal Analytics bụ ihe kwesịrị ekwesị. Nke a bụ otu Semalt Analytics nwere ike isi nyere gị aka ịkwalite ọkwa SEO gị.
Nyochaa Nwee Ọganiru
Nzọụkwụ mbụ iji ruo ebumnuche ọ bụla bụ ime ka a mata nke ọma ihe ụzọ na-eduga ebumnuche ahụ dị. Nke a pụtara, ịkọwapụta ebumnuche doro anya ma dị nkenke megide oge a ga - eme ka ọ gbalịsie ike iji nweta ihe ịga nke ọma. Maka weebụsaịtị, nke a pụtara inyocha ọnọdụ gị ugbu a na weebụ yana ịkọwapụta ụfọdụ isi metutara metụtara ma ihu akwụkwọ ma na peeji SEO.
Nchịkọta Semalt na-enye gị ikike ịnwe nyocha zuru ezu banyere ọnọdụ weebụsaịtị gị site na nzụlite azụmahịa. Ngwanrọ nyocha na-enyere gị aka ịghọta ogo ma ọ bụ na njikọ azụ gị. Ọ na - enyere gị aka iji oge nke ibe gị tụnyere oge ndị na - asọmpi gị ma nyere gị aka ịghọta nke ọma njikọ njikọ weebụsaịtị gị.
Ingghọta metrik ndị a na - enyere gị aka ịchọpụta ebe ịkwesịrị ilekwasị anya ma nyere gị aka ịmegharị uche gị na ike gị. Ọ bụrụ na Semalt Analytics na-ekwupụta na ịnweghị akara dị elu na ndepụta ekwentị-mbụ, mgbe ahụ ọ bụ ebe ịkwesịrị ilekwasị anya. Ọ bụrụ na ọ nwere njikọ azụmaja na weebụsaịtị weebụ dị elu, mgbe ahụ Semalt Analytics ga-agwa gị naanị nke ahụ.
Innovate Iji Ndu
Nchịkọta Semalt na-enye usoro arụmọrụ nke weebụsaịtị gị ma nyere gị aka ịghọta ụkpụrụ mpaghara nke gị na ebe nrụọrụ weebụ ịsọmpi gị. Ọ na - enyere gị aka idobe usoro ị na - agaghị achọpụtakarị nke ga - eme ka ị nweta ozi ndị ọzọ gbasara azụmahịa gị, ma nye gị data ileba anya maka imeziwanye ihe ma mepụta ihe ọhụụ.
Site na nchịkọta mpaghara, ị nwere ike ịkpụzi usoro azụmaahịa gị n'ime ihe na-enye gị ohere kachasị mma nke ịga nke ọma na mpaghara mpaghara. Ọ na-ebelata ihe ize ndụ gị ma na-enye gị ụzọ doro anya ihe ịchọrọ iji nweta ma nyere gị aka ịghọta otu esi enweta ya. Ọ na - enyere gị aka iji nwayọọ kesaa akụ gị, na - enye gị ohere ịchekwa akụ gị maka ihe ndị ka mkpa.
Debe Ndị asọmpi gị nso
Nchịkọta Semalt na-enye gị ohere mmeri megide ndị asọmpi gị site n'ikwu ọnọdụ ha n'ahịa dị ka nke gị. Know ma ihe ndị asọmpi gị na-eme na etu ha si eme ya. Enwere ike iji nchịkọta ahụ wee kpachara anya mee atụmatụ gị iji merie ha na mpaghara ụfọdụ nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị elu.
Y’oburu na ohuru ohuru, ighota ka ndi osompi gi si achu ije n’eme ka i gba oso oso oso. Ọ bụrụ n’ikpebie ime nyocha nke gị, ọ nwere ike iwe gị nnukwu oge. Mana na Semalt nchịkọta, ị nwere ike ịghọta atụmatụ SEO nke ndị asọmpi gị ngwa ngwa n'ime oghere ọchụchọ gị na naanị pịa ole na ole.
Sọftụ nyocha ahụ na-enyekwa gị ikike ịkọwapụta ọganihu gị ka oge na-aga. Iji usoro a, ị nwere ike jiri ịnụ ọkụ n'obi nweta nzaghachi na usoro SEO gị nke dịlarị, wee wuo akụrụngwa nzaghachi nke na-eme ka ọkwa gị dị mma ka ọ dị mma.
Site na Semalt Analytics, ị nwere ike ịgbanwe data nyocha n'ụzọ dị mfe na usoro nke nhọrọ gị. Site na iji bọtịnụ dị mfe, a ga-ebupu data gị na mapụta Excel na PDF na-enye gị ohere iwepụta ozi gị n'ụdị agụmakwụkwọ mmadụ ma mepụta ngosipụta maka otu na ndị ahịa gị.
Site na Semalt nchịkọta, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ike nyocha gị. Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka mkpa nyocha gị.
Aro di mma
Eleghị anya akụkụ kachasị mkpa nke SEO bụ nyocha isiokwu. Dchọta akara isiokwu ziri ezi iji nwaa ma tụọ weebụsaịtị gị megide ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ị ghọta oghere ahụ nke ọma. Usoro nyocha bụ usoro okike chọrọ oge na mgbalị.
Nchịkọta Semalt na-enye gị aro ndị gbara ọkpụrụkpụ na ị ga-enyere gị aka ịghọta oghere ọchụchọ ahụ nke ọma. Site na iji echiche okwu ahia azụmaahịa dị na ya, usoro gị nwere ike ịga nke ọma.
Aha Isi Okwu
Chọpụta isi okwu iji lelee maka ọkwa SEO gị nke ọma bụ naanị akụkụ nke egwuregwu ahụ. Nchọpụta Ihe Nchọpụta Nhazi bụ usoro nke nnwale na njehie na-achịkwa. Ọ bụ naanị mgbe nzaghachi ị nwetara site na mbọ SEO gị ka ị nwere ike ikpebi arụmọrụ ha. Site na nchịkọta Semalt, ị nwere ike ịtụle otú nyocha isiokwu gị si eme nke ọma maka ọkwa weebụ gị. Ọ na - enye ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na - eduga peeji gị site na ụfọdụ isiokwu. Ọ na - enyere gị aka ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ iji nweta kachasị site na usoro ọchụchọ.
Ingghọta ihe njiri mara ahịa gị na-enyere gị aka ịme ngagharị maka atụmatụ banyere weebụsaịtị gị. Ọ ga - enyere gị aka ịchọpụta etu ndị na - ege ntanetị si achọpụta ebe nrụọrụ weebụ gị, na - enye gị ike nke inyefe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị ka ụkpụrụ kachasị mma. Site na nchịkọta Semalt, a na-atụle njirimara nke akara gị site na ọnụego ya na-ewu ewu na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na atụmatụ ụlọ ọrụ gị ma mụbaa mmata dịka enwere ike ịdị mkpa.
Ka ị na-eme atụmatụ SEO gị, ị ga-achọ ọnụọgụ ọnụọgụ iji kpebie ebe nrụọrụ gị dị ugbu a gbasara ụfọdụ isi okwu. Nchịkọta Semalt na-enye gị ọnọdụ isiokwu gị na ntanetị ka oge na-aga, na-enye gị ohere ihu ụkpụrụ ị nwere ike ị gaghị ahụ. Nlere anya nke ihe ị na-eme nwere ike rụọ ezigbo ọrụ ma a bịa n’ịhazi atụmatụ ịmepụta ọhụụ.
Choputa ndi mpi
Ọchụ nta ka a na-achọ ohere ịchọ. O siri ike iwepụta usoro ọchụchọ a na-agaghị alụ ọgụ ya. Nchịkọta Semalt nyocha ndị asọmpi maka gị ma nye gị nghọta doro anya banyere ọnọdụ ha dị ugbu a na oghere ọchụchọ; ebe ha kacha sie ike; ma ebe enwere ebe iwere ya. Site na usoro nyocha ndị a, ị nwere ike iji obi ike soro ndị asọmpi gị na-asọmpi.
Search engines dị ka Google nwere usoro nzuzo nke ha na-eji nọrọ na ntanetị megide okwu ọchụchọ. Ọ bụ ezie na algọridim ahụ bụ ihe nzuzo, enwere ụfọdụ ọnụọgụ enyere nke websaịtị ga-ezute iji ruo eru maka ọkwa kachasị mma. Mpempe ndị a gụnyere ịgụpụta, mkpa maka ọnọdụ ọchụchọ, ọsọ saịtị yana ọtụtụ akụkụ ọrụaka ndị ọzọ. Nchịkọta Semalt na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ gị ka ị wee jide n'aka na ọ na-emezu njirisi SEO n'ụzọ zuru ezu, ọ nweghịkwa isi mpaghara ọ bụla.
Otu nchịkọta Semalt na - enyere gị aka ịnọ n'ọnọdụ
Naanị banye na akaụntụ Semalt Analytics gị ma bido usoro nchịkọta data. Akụrụngwa ahụ ga-enye gị akụkọ zuru ezu banyere SEO na ebe nrụọrụ weebụ gị na nke ndị asọmpi gị. Nchịkọta Semalt na-atụ aro isiokwu ọchụchọ na okwu ị nwere ike iji bulie ogo SEO gị. Ọ na-eme nke ahụ site na ịnakọta data kwa ụbọchị, na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ mgbaru ọsọ gị chọrọ na ịtụle akparamagwa onye ọrụ yana usoro nchọta a na-ahụkarị.
A na-emelite nchịkọta ahụ kwa ụbọchị ka ị ghara inwe oge maka ihe na-eme na ngalaba ọchụchọ gị. Site na nzacha dị iche iche dị, ị nwere ike igbochi ụfọdụ mkpụrụokwu na-eme ka nyocha gị bụrụ nke ọma. Njirimara dịka ịkpa ụta isi okwu nwekwara ike ịkwalite nrụpụta gị.
Nchịkọta Semalt na-enyekwa gị ikike iwere data na nchịkọta ma kpughee ha site na njedebe ikpeazụ nke Semalt. Nanị hazie ndị njedebe ma gosipụta data nyocha gị na isi mmalite ị họọrọ.
Iji nọrọ na ntanetị ka ọ dị mma na ngwa ọchụchọ, SEO kwesịrị ịrụ ọrụ. Ọ bụ usoro okike na teknụzụ chọrọ oge na mbọ. Site na Semalt nchịkọta, SEO gị na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, na-enye gị oge na mgbanwe iji lekwasị anya na atụmatụ na ihe ọhụrụ. Nchịkọta Semalt na-enyere gị aka imezu ebumnuche SEO gị naanị ole na ole.